Soosaarayaasha iPhone 12 - Shiinaha iPhone 12 Warshad & Shirkado
Alaabta muraayadaha caarada ah ee khafiifka ah
Astaanta Khaaska ah ee Muraayadaha Muraayadda ah
OTAO muraayadda loo yaqaan 'Logo muraayad qabow leh' waxay isticmaashaa farsamooyin kala duwan si loogu daro qaababka ama qoraalka aad rabto muraayadeena qabow. Sidan oo kale, alaabadaada ayaa laga sooci karaa noocyada kale. Waxaad ku siin kartaa macaamiishaada muraayadda qaboojiyaha leh Logo hadiyad ahaan, ama waxaad dejin kartaa qaabab aad ku soo jiidan karto dhalinyarada. Marka macaamiisha lagu rakibo muraayadda shirkaddaada, waxay sidoo kale kor u qaadeysaa magacaaga. Iyo haddii ay dhacdo ka dib iibka, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa naqshad ka hortag been abuur ah si loo aqoonsado inay tahay sheygaaga.
IPhone 12 taxanaha 2.5D asturnaanta ilaaliyaha shaashadda muraayadda
Markaad isticmaaleyso taleefanka gacanta oo aan lahayn filimka asturnaanta, shaashadda ayaa ah shaashad wadaag ah, sidaa darteed adiga iyo dadka kugu hareeraysan waxaad si muuqata u arki kartaa shaashadda. Markaad geliso OTAO muraayadda qaboojiyaha qaaska ah shaashadda, waa shaashad khaas ah oo qarsoodi ah, oo adiga kaliya ayaa arki kara adiga oo macluumaadka shaashadda aan laga arki karin dhinaca.
360 Isugeynta Ilaalinta Jirka oo buuxda iPhone 12
Kiis mobile qafiif ah oo khafiif ah oo goyn sax ah lagu dhex daray galaas heer sare ah, ayaa bixiya 360 digrii oo ilaalin buuxda oo jirkaaga ah si aad uga hesho iPhone ka xoqida, qashinka iyo faraha, sidoo kale wuxuu taleefankaaga ka ilaaliyaa saameynta ama dhibcaha nasiib darada ah.
IPhone 12 taxane ah 3D bakteeriyada ka hortageysa shaashadda ilaaliyaha shaashadda
99% QIIMEYNTA DHAQAALAHA: Filimka difaaca ee shaashadda waxaa loo sameeyay iyadoo lagu saleynayo mabda'a jeermiska looga hortago bakteeriyada oo leh ion lacag ah, kaasoo hor istaagi kara koritaanka bakteeriyada waxyeellada leh, sida Escherichia coli, Staphylococcus aureus, iwm.
iPhone 12 taxane 3D ilaaliyaha shaashadda muraayadda muraayadda leh
3D Muraayadaha qalooca ee qalooca oo badanaa loogu talagalay taleefannada gacanta ee qalooca.
Qaabeynta dhabta ah ee 3D waxay u oggolaaneysaa diyaaradda fidsan inay qalloocdo, iyadoo siineysa taam ku habboon oo lagama maarmaan u ah aaladaha cirifka wareega.
iPhone 12 taxane 3D cusbi dariiqa ilaaliyaha shaashadda muraayadda
Markaad isticmaaleysid shaashad muraayad muraayadaysan si aad u ilaaliso taleefankaaga, Dadku had iyo jeer waxay ka fekeraan haddii ay heli karaan ilaaliye muraayad ah oo aan dhibaato lahayn "Si fudud ayaa loo jabiyey".
Ku dheji OTAO 3D muraayadda geeskeeda muraayadda qaboojiyaha shaashadda, iskudarka qumman ee cusbada iyo dhalada, burburin kara geeska, kama walwalaysid qarka jaban!
IPhone 12 taxanaha 2X ilaaliyaha shaashadda muraayadda leh ee burbura
Waa maxay Muraayadda 2X ee wax dumisa?
Muraayadda la dhajiyay waxaa lagu farsameeyaa habka xoojinta laba-geesoodka ah ee habka wax soo saarka si loo hagaajiyo adkaanta iyo saameynta caabbinta muraayada lafteeda.
Markaan iibsano mobiil cusub, waxaan xaqiiqdii dooneynaa inaan ku dhajino shaashad muraayad muraayad leh oo leh adkaansho sare iyo caabbinta saamaynta adag. OTAO waxay leedahay fikrad, si loo gaaro saameyn kahortag shaashadeed oo wanaagsan, qaadashada xoojinta labalaabka ah (2x galaaska jajaban) waxay khibrad fiican u keenaysaa macaamiisha.
IPhone 12 taxanaha 2.5D daboolka buuxa ilaaliyaha shaashadda muraayadda
Magaca ayaa loola jeedaa soo koobida geesaha muuqaal "2D" ah oo ku yaal z-dhidibka, ku darista qalooc yar oo sida caadiga ah noqonaysa gees toosan.
Markaad isticmaaleyso muraayad qaboojiyaha daboolka buuxa leh ee 2.5D, Waxay ka hortagi kartaa geeska filimka qaboojiyaha inuu waxyeelo.
iPhone 12 taxane Lens Ilaaliyaha Ilaaliyaha
Kahortaga muraayadaha kahortaga oo ka ilaaliya muraayadaha indhaha xoqida ama waxyeelada dhicitaanka hadana ilaalinaya muuqaalka 100% ee sawirka. Muraayaddu waxay ka kooban tahay 5 lakab oo dammaanad ka qaadaya ilaalinta iyo waxqabadka sare ee kamaradda.
iPhone 12 taxane kamarad ilaaliyaha muraayadda muraayadda ah
Sidee Loogu Xulaa Muraayada Muraayadaha Kaamil Wanaagsan ee iPhone 12 taxane ah?
Aaladaha cusub ee Apple waa daaweyn dhab ah oo isha ku socota oo leh shaashado ballaaran oo mobiil ah iyo qaybaha kamaradaha ballaadhan ee xagga dambe. Iyada oo raaxo kordhay iyo hodantinimada ayaa loo baahan yahay dayactir ku filan. Iyo, marka ay timaado daryeelka moduleka kamaradda ee taxanaha iPhone 12, fidinta hababka ugu fiican waa muhiim.
2.5D Matte Gargaaraha Screen for iPhone 12 taxane
OTAO's cadeynta sare ee shaashadda muraayadda muraayadda muraayadda leh ee ka hortagga milicsiga taas oo si wax ku ool ah uga hortagi karta dhalaalka waxyeellada leh isla markaana yareyn kara iftiinka iftiinka si loo ilaaliyo indhaha.